विद्यार्थीहरूलाई यसरी सहयोग गरिरहेको छ ‘क्यानोपी’ले:: Naya Nepal
विद्यार्थीहरूलाई यसरी सहयोग गरिरहेको छ ‘क्यानोपी’ले
झन्डै ६ महिनादेखि शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। स्कुल बन्द हुँदा सहरी क्षेत्रका अधिकांश निजी तथा सामुदायिक स्कुलले अनलाइनमार्फत पाठ्यक्रम अघि बढाउँदै छन्।
सबै विद्यार्थी सहभागी नहुने भएकाले स्कुल, शिक्षकदेखि अभिभावकसम्मलाई असहज र चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको छ। एक सातायताबाट भने केही स्कुल भौतिक रूपमै पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन्।
तर स्कुल सामान्य हिसाबले नखुल्दा पाठ्यक्रममा असर त पर्ने नै भयो, विद्यार्थीले थुप्रै कार्यक्रम ‘मिस’ गरेका छन्।
पाठ्यक्रमै कसरी अघि बढाउने अन्यौलमा यस्ता कार्यक्रमलाई कत्तिको प्राथमिकता दिने र?
अधिकांश स्कुलले यस्तै सोचे पनि ‘क्यानोपी नेपाल’का संस्थापक तथा अध्यक्ष मोहित रौनियार यस्ता कार्यक्रमको महत्व रहेको बताउँछन्।
क्यानोपीले विगत चार वर्षदेखि विद्यालय केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विशेषगरी यसले सामुदायिक र सरकारी स्कुल लक्षित कार्यक्रम गर्छ। निजी स्कुलका लागि भिन्नै कार्यक्रम पनि छन्।
रौनियार भन्छन्, ‘जस्तो सुकै परिस्थितिमा विद्यार्थीका लागि नैतिक तथा सामाजिक विकास र मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम आवश्यक हुन्छन्। अझ यस्तो महामारीमा घरै बस्ने हुँदा हरेक व्यक्तिले आफूलाई कुनै न कुनै काममा व्यस्त राख्दा राम्रो हो।’
त्यसैले क्यानोपीले लकडाउन र निषेधाज्ञामा समेत विभिन्न तरिकाले कार्यक्रम गरेको रौनियार बताउँछन्।
क्यानोपीले मुख्य रूपमा भौतिक उपस्थितिमै कार्यक्रम गर्ने हो। तर स्कुलै बन्द भएपछि तरिका फेर्नुपरेको रौनियारले बताए।
‘पहिलो चरणको लकडाउनदेखि नै विद्यार्थीका लागि विभिन्न कार्यक्रम भित्र्यायौं,’ उनले भने।
यसनिम्ति क्यानोपीले विद्यार्थीसँग कसरी जोडिने भनेर उनीहरूलाई तीन वर्गमा राखे।
पहिलो- मोबाइल/ल्याप्टप र इन्टरनेट सजिलै पहुँच भएका विद्यार्थी।
दोस्रो- मोबाइल हुने र डाटामार्फत इन्टरनेट चलाउने क्षमता भएका।
तेस्रो- प्रविधिसँग जोडिनै नपाएका।
रौनियारका अनुसार यी तीनै वर्गका विद्यार्थीसँग क्यानोपी जोडिएको छ। एकै किसिमका कार्यक्रम सबै विद्यार्थीलाई पक्कै मिल्दैन। त्यसैले कार्यक्रम त्यही हिसाबले विभाजन गरिएको उनी बताउँछन्।
इन्टरनेट पहुँच सजिलै हुनेका लागि क्यानोपीले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम तर डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्‍यो।
क्यानोपीका नियमित कार्यक्रमहरू यस्ता छन्ः
कथा बुनौं- बालबालिकाका भावना कथामार्फत प्रस्तुत गर्ने।
इआइसी- विद्यार्थीलाई कुनै पनि विषयमा आलोचनात्क धारणा राख्न प्रेरित गर्ने।
लेखौं- कुनै पनि विषयमा लेख्न प्रोत्साहन गर्ने।
यी कार्यक्रम यतिबेला इन्टरनेट सहजै पहुँच भएका पहिलो वर्गका विद्यार्थीका लागि भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।
दोस्रो वर्गका विद्यार्थीका लागि पनि ‘लेखौं’ र ‘कथा बुनौं’ जस्ता कार्यक्रम क्यानोपीले गर्‍यो। यो वर्गका विद्यार्थीलाई क्यनोपीले रिचार्ज कार्ड सेवा पनि उपलब्ध गराएको रौनियारको भनाइ छ।
‘उनीहरूका लागि आयोजित धेरै जसो कार्यक्रम मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा केन्द्रित छन्,’ उनले भने।
प्रविधिसँग जोडिनै नपाएका तेस्रो वर्गका विद्यार्थीसँग जोडिन भने क्यानोपी टोलीले केही समस्या झेल्नुपर्‍यो। उनीहरूसँग जोडिन टोलीले नयाँ कार्यक्रम नै बनाए।
‘उनीहरूलाई शैक्षिक विषयभन्दा बढी दैनिक आवश्यक सामग्रीको खाँचो थियो,’ रौनियार भन्छन्, ‘यो वर्गका विद्यार्थीलाई हामीले पौष्टिक खाना, स्टेसनरी र स्यानिटरी सामान वितरण गर्‍यौं।’
यस्ता झन्डै ५०० विद्यार्थीलाई सामान वितरण गरेको उनी बताउँछन्। यही वर्गका विद्यार्थीका लागि क्यानोपीले नयाँ पाठ्यक्रम किताब पनि सार्वजनिक गर्दैछ। यी किताब ९ देखि १३ वर्षका विद्यार्थीलाई लक्षित हुनेछन्।
क्यानोपी पहिलो लकडाउनदेखि हालसम्म झन्डै २७ वटा स्कुलसँग जोडिसकेको छ। बाह्र सयभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि कार्यक्रम सफल ढंगले सञ्चालन गरिसकेको रौनियारले बताए।
१४ जनाको मुख्य टोली रहेको क्यानोपीसँग १३० जना बढी सदस्य जोडिएका छन्। रौनियारका अनुसार संस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षार्थीको पनि संलग्नता छ। सन् २०१६ को मध्यबाट सुरू क्यानोपी स्थापनाताका रौनियारसँगै रोशन भट्ट र शैफउल्ला मोहम्मद पनि थिए। अहिले भने पूर्ण हिसाबले रौनियारले मात्र सञ्चालन गर्दैछन्।
चार वर्षमा अहिलेसम्म काठमाडौंभित्र र बाहिर गरी उनीहरू ९७ स्कुलसँग सम्पर्कमा आइसकेका छन्। यीमध्ये ७५ वटा सामुदायिक स्कुल रहेका उनले बताए।
चार हजार बढी विद्यार्थीसँग जोडिएको यो समूहले छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ। यसमा एनसिइपी (नेसनल सेन्टर फर इन्भाइरोंमेन्टल प्रेडिक्सन) र फोनाइ अस्ट्रेलियाको सहकार्य छ। क्यानोपी छात्रवृत्ति प्रोजेक्ट (क्यानसिप) र फोनाइ एजुकेसन छात्रवृत्ति कार्यक्रम (फेन्सिप) नाममा हालसम्म यसले ११० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको रौनियारको भनाइ छ।
‘यो वर्ष ५८ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने योजना थियो। महामारीका कारण आर्थिक अवस्था उथलपुथल भयो। त्यसैले २१ जनालाई मात्र दिँदैछौ,’ उनले भने।
बालबालिकालाई सानैदेखि आत्मनिर्भर हुन र नैतिक ज्ञानबारे शिक्षा दिन तम्सिएको क्यानोपीले आगामी दिनमा शैक्षिक विकासका लागि विभिन्न नयाँ कार्यक्रम गर्ने रौनियार बताउँछन्।
‘बालबालिकालाई पाठ्यक्रम पढाइले मात्र पुग्दैन। बाहिरी ज्ञान र सीप विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउनु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि हामी जतिसक्दो धेरै बालबालिकासँग जोड्ने प्रयासमा खटेका छौं।’
पैसाबाट पनि कोरोना सर्ने, नेपालमा संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च
कठमाडौँ । नेपालमा नयाँ संक्रमित सख्या अहिलेसम्मकै उच्च देखिएको छ। बिहीबार एकैदिन १९ सय ११ जना संक्रमित थपिएका छन्।
गत २४ घण्टामा १२ हजार ४ सय ४४ वटा नमुना परीक्षण भएको छ भने कुल परीक्षण संख्या १० लाख ३३ हजार ९ सय ४७ पुगेको छ।
दैनिक कोरोना संक्रमण र मृत्युदरमा वृद्धि हुँदै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जोखिम स्थानका हरेक नागरिकले पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी आफू र घरमा रहेका दीर्घरोगी, वृद्ध–वृद्धालाई संक्रमणबाट बचाउन अनुरोध गरेको छ।
पछिल्लो चरणमा बढी मात्रामा संक्रमण हुनेमा समूहमा बस्ने, समूहमा काम गर्ने, बैंक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, दैनिक तरकारी बजारमा आवात–जावात गर्नेहरू रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए। ‘यी ठाउँमा काम गर्नेले सुरक्षा मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गर्नुहोला,’ उनले भने।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको भिडियामो डा. कृष्णा मल्ल वैद्यले कोरोना संक्रमित व्यक्तिले चलाएको पैसामा पनि कोरोना हुने भएकोले पैसा चलाएपछि साबुनपानीले हात धुने या राम्रोसित सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सुझाएकी छिन्।